Terms sy ny famaritana - Trading - Libertex
Home»Terms sy ny famaritana - Trading
Terms sy ny famaritana – Trading
Trading asan'ny fanahy
Actual Price dia Quote amin'ny izay ny Company dia vonona ny hitarika ny Trading Operation amin'ny anankiray Point-potoana.
Anontanio Price no vidiny amin'ny izay ny Client dia afaka hitarika ny Trading Operation hividy fitaovana, for Trading ny terminal izay mamela nitarika Trading asan'ny fanahy amin'ny Fielezan'ny.
alalana Olona dia voajanahary na juridique olona fahefana amin'ny fomba ofisialy ny fitantanana na fitondran-tena asa manokana.
Available vola dia ny vola aseho ao amin'ny Bonus Account fizarana Manokana Account Management Portal izay azo nafindra avy amin'ny Bonus Account ny Trading Account ary avy eo dia ampiasaina araka ny fitsipika napetraka ho Trading Kaonty.
Mila mahay mandanjalanja dia vola eo amin'ny Client manavaka ny Trading Account Open Fihevitra vokatry; Hitsiny ny Trading Account mihevitra ny vokatry ny rehetra Closed Fihevitra sy Non-Trading asan'ny fanahy.
Base Sandam-bola dia vola ao amin'ny Sandam-bola Miaraka tsiroaroa izay novidina na namidy ho an'ny Quote Sandam-bola (Counter Sandam-bola). Izany dia ao amin'ny numerator tao amin'ny Sandam-bola Miaraka tsiroaroa (ny vola voalohany eo amin'ny roa).
Ampandehano Price no vidiny amin'ny izay ny Client dia afaka manao mivarotra barotra (mivarotra fitaovana), fa Trading ny terminal izay mamela nitarika Trading asan'ny fanahy amin'ny Fielezan'ny.
Business Day dia ny androm avy 06:00 ny 15:00 GMT isan'andro, afa-tsy ny faran'ny herinandro sy ny fety. Ny vaovao farany momba ny faran'ny herinandro sy ny fety dia nivoaka tao amin'ny Company ny Website. Mety ho nifindra ho 1 ora nandritra ny ririnina sy ny lohataona ny fotoana fanovana.
CFD Instrument dia fitaovana izay Trading Operation no natao, ary izay miorina amin'ny fototra sasany Asset. Ny fototra Asset Mety ho tafiditra amin'izany mizara, entana, indices, hoavy ary koa ny zavatra hafa, anton-javatra sy ny toe-javatra araka ny lisitra neken'ny Company. Ny vaovao mikasika ny isan'ireo fitaovana CFD dia navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny ny Company sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Clear mandanjalanja ny vola - azo fialana vola izay ny Client dia tsy mampiasa ny asa atao amin'ny Trading. Ny habetsahan'ny Clear mandanjalanja ny Tahirim-bola dia nokajiana avy ny orinasa araka ny fitsipika napetraky ny Company. Ny vaovao mikasika ny habetsaky ny Clear mandanjalanja ny vola azo manokana voalaza manokana ao amin'ny Account Management Portal sy na Trading Terminal.
Client dia voajanahary na juridique olona miditra ho toy ny fanekena ny orinasa sy mitarika Trading asan'ny fanahy ao anatin'ny sehatra ny fifanarahana sy ny Appendices.
Client ny Account dia tantara manokana ao amin'ny Account manokana Management Portal nanokatra ny orinasa noho ny fitandremana ny Client ny vola sy ny fitarihana Trading asan'ny fanahy.
Closed Position dia vokatry ny fanatanterahana ny tapany faharoa ny mandroso sy miverina (Ara-barotra Operation ny fanakatonana ny toerana).
Company ny Account dia Company ny tantara amin'izao fotoana izao ao amin'ny andrim-panjakana ara-bola, kaonty (kitapom-batsy) in elektronika rafitra fandoavam-bola ary koa tantara hafa anisan'izany ny fitantarana ny fandoavana Agents.
Counter Sandam-bola (Quote Sandam-bola) dia vola izay ampiasaina amin'ny nividy sy nivarotra Base Sandam-bola. Tao amin'ny Sandam-bola Miaraka tsiroaroa Counter Sandam-bola dia aseho amin'ny alalan'ny denominator (ny faharoa Sandam-bola iray ao amin'ny Miaraka tsiroaroa).
Sandam-bola Miaraka tsiroaroa (Forex) dia roa vola (Base Sandam-bola sy Counter Sandam-bola) izay anjara ao amin'ny Trading Operation amin'ny vola fitaovana. Ny vaovao momba ny isan'ny Ny tsiroaroa Sandam-bola dia aseho eo amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Dealer dia ny Company mpiasa nahazo lalana panjakana Quotes, manara-maso ny marina ny Trading fiasan'ny ny Mpanjifany, tahony mitaraina ary hazavao ny toe-javatra mikasika ny varotra nitarika Trading asan'ny fanahy ao amin'ny Mpanjifany 'kaonty.
ny hitsiny dia zavatra mavesa-Tombanana ny vola lany ny vola ao amin'ny Trading Account izay mahaforona ny habetsahan'ny vola teo amin'ny Trading Account ao anatin'izany ny tsy tanteraka tombony (very).
lany dia lany amin'ny CFD Instrument, Trading nijanona itarihana ny asan'ny fanahy amin'ny fotoana sy ny fototra Asset manomboka ny asan'ny fanahy Trading nitarika ny manaraka. Lany daty ho an'ny tsirairay fitaovana CFD dia napetraky ny Company samy irery, ary dia faritana ao amin'ny orinasa ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
External Client ny Account amin'izao fotoana izao dia tantara ao amin'ny andrim-panjakana ara-bola, kaonty (kitapom-batsy) in elektronika rafitra fandoavam-bola.
Raikitra Price Famonoana (Amin 'ny fangatahana) dia karazana famonoana Trading asan'ny fanahy rehefa Voalohany Client dia nomena ny teny nalaina mivantana noho ny fitarihana Trading Operation ary avy eo izy dia manamafy ny ny Te hanao ny Trading Operation amin'ny fipihana amin'ny vola an-Trading Terminal. Rehefa avy manindry amin'ny vidiny ny Trading na Operation dia nanamafy ny Company ny lohamilina, na ny Client dia nanolo-kevitra ny hangataka ny fitanisàna ny mitarika Trading Operation indray.
Ny famoizana-bola ny fanesorana ny vola avy amin'ny Client ny Trading Account sy ny famindrana ny na ny banky antsipirihany, na ny banky tsipiriany ny Client ny Olona-pahefana na ny voalaza ao amin'ny fangatahana fanesorana azy.
Gap dia fiovan-misy vidiny, rehefa manaraka Quote mitovy amin'ny teo aloha amin'ny alalan'ny maro iray (am-polony) ny Pips.
Hedging (hanidy) dia manana roa Open Fihevitra fa iray ihany no fitaovana izay misy toerana iray ny lavany, ary ny hafa dia fohy.
voalohany sisiny (sisiny Requirements) no niantoka izay takiana mba hanokatra toerana. Requirements sisiny isaky ny fitaovana dia faritana amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Instant Famonoana dia tandindon 'Trading asan'ny fanahy famonoana ny Client, rehefa te hitarika ny Trading Operation amin'ny fipihana amin'ny vola an-Trading Terminal. Raha misy vidiny dia mbola tena ny Trading Operation hamafisina. Raha misy Quote ao amin'ny Trading Terminal Tsy tena intsony ny Client dia atolotra vaovao Trading saran'ny Operation famonoana. An tolotra hitarika ny Trading Operation amin'ny vidiny vaovao dia manan-kery mandritra ny fotoana voafetra fe-potoana. Ny Client dia miombon-kevitra amin'ny mety Trading Operation famonoana na oviana na Actual Price ny Company ny lohamilina dia tokony ny Client ny ezaka mba hitarika ny Trading Operation imbetsaka (tsy latsaky ny 2 (roa) ezaka misesy) holavin'ny ny mpizara ny orinasa noho ny fanovana ny Actual Price eo amin'ny lohamilina.
ara-bola fitaovana dia Spot fitaovam sy (na) CFD Instrument. Ny vaovao mikasika ny isan'ireo fitaovana dia aseho eo amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Leverage no tahan'ny eo amin'ny boky ny Trading Operation sy ny habetsahan'ny voalohany sisiny.
fetra (Raiso Profit) dia tandindon izay voatendry ny Order raha toa izany Order dia napetraka mba hivarotra amin'ny vidiny (taha) izay ambony kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny tsena, na ny mividy amin'ny vidiny (taha) izay ambany kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny tsena. Ny tena tanjon'ny Aza dia Filaharana dia ny miantoka ny Trading Operation famonoana ho faty amin'ny vidiny izay tsy ratsy kokoa noho ny olona voalaza ao amin'ny Order.
hiditra File dia ampahany amin'ny Trading Terminal sy (na) ny Tena Manokana Account Management Portal natao ho manamboatra (peo) angona nafindra ny Mpifanaraka amin'izy samy izy nandritra ny fahatanterahan'ny ny fifanarahana tamin'ny alalan'ny Trading Terminal sy (na) ny Tena Manokana Account Management Portal. Isaky ny fidirana ny fifanarahana Antoko amin'ny Trading Terminal na ny Personal Account Management Portal ho raikitra ao amin'ny Log File sy duplicated amin'ny Company ny lohamilina. Ny voalaza servers vaovao no tena loharano ary nanaiky ny Companies toy ny porofo raha ny mandinika disputable toe-javatra mifandray amin'ny fahatanterahan'ny fifanarahana ity. Ny vaovao avy amin'ny Log File ny orinasa ny Server dia tanteraka laharam-pahamehana ny fanehoan-kevitra hafa, rehefa mandinika ny toe-javatra disputable anisan'izany ny momba ny vaovao avy amin'ny Log File ny Client sy ny Trading Terminal (na) ny Tena Manokana Account Management Portal. Ny orinasa tahirin ny zo tsy hamaha ny zava-misy ny fahafahana miditra ao amin'ny fifanarahana Party ho any amin'ny Trading Terminal na ny Personal Management Portal Account ao amin'ny Log File.
Long Position dia mividy fitaovana miaraka amin'ny fanantenana fa ny vidiny (zava-dehibe) hitsangana.
Lot dia fitsipika boky ny fitaovana raha oharina amin'ny izay ny Trading Operation dia nitarika. Trading Operation iray dia azo natao ho an'ny maro, na ny faritra maro. Ny habe ny maro isaky ny fitaovana sy ny karazana Trading Terminal dia faritana amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
sisiny Level (hitsiny Level) dia ny rariny sy ny tahan'ny eo amin'ny sisiny Required, naneho toy ny isan-jato.
sisiny Required (Voatokana vola, sisiny) ny vola dia voasakana ao amin'ny Client ny Trading Account mba hihazonana rehetra (azy) Open Fihevitra. Sisiny Requirements ilaina mba Open Fihevitra ho an'ny fitaovana tsirairay dia faritana amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Market Famonoana (Actual Price) dia tandindon 'Trading asan'ny fanahy famonoana ny Client, rehefa te hitarika ny Trading Operation rehefa nanaiky eo anatrehan'ny fa Trading Operation dia hovonoina ho faty amin'ny vidiny izay tena ao amin'ny orinasa ny lohamilina (tsy fanatitra Quotes vaovao).
Mid Price dia ny vidiny eo amin'ny Ampandehano ary mangataka Prices amin'ny izay ny Client dia afaka mitarika ny Trading Operation amin'ny Trading ny terminal izay mamela mitarika Trading fandidiana tsy Fielezan'ny.
hetsiky dia ny tahan'ny vola eo amin'ny ara-barotra isan-jato Libertex fiovana eo amin'ny alalan'ny terminal sy ny antony Asset vidin'ny, Base Sandam-bola isan-jato Price fanovana. Ny vaovao farany momba ny ambony indrindra ho an'ny Multipliers habe ny ireo fitaovana tsirairay ireo no nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Company sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Non-Trading Operation dia asan'ny famindrana ny vola sy ny (na) manoratra-bola avy amin'ny Client eny amin'ny Trading Account ary koa ny asan'ny fanahy hafa tsy nifandray mivantana tamin'ny famonoana asan'ny fanahy Trading.
Open Position dia habetsahan'ny nividy ny fitaovana (na nivarotra), tsy rakotry ny mifanohitra fivarotana (levitra) toy izany koa ny fitaovana teo mitovy vola sy ny (na) boky; ny vokatry ny fanatanterahana ny ampahany voalohany iray mandroso sy miverina varotra (Varotra fiasan'ny toerana fanokafana). Vokatry ny fanokafana ny toerana madio ny Client dia manana ny) hitarika ny mifanohitra Trading Operation fanakatonana ny toerana misy ny mitovy vidy; amin ') foana ny sisiny Level tsy latsaky ny iray napetraky ny Company (fa ny fampiasana ny terminal hevitra ity).
Order (miandry Order, fetra, Level) dia Client ny fepetra mba hitarika ny Trading Operation raha toa ny toe-javatra, napetraky ny Client ao amin'ny Client ny Trading Terminal dia nihaona; izany no dikan'ilay Order fa toy izany dia ho faty amin'ny fotoana tsy voafaritra mazava tsara amin'ny ho avy araka ny baiko voalaza dingana famonoana ny Appendices ny amin'ity fifanarahana ity. Available Order karazana miankina amin'ny Trading Terminal nifidy ny Client.
Point (Pip) dia iray avy amin'ilay kely indrindra-Dahatsoratra vondrona manan-danja izay 0,0001 na 0,01 arakaraka ny fitaovana. Ny fanovana ny Quote ho an'ny 1 (iray) tarika ny sokajy zandriny dia midika ho fiovana ho an'ny 1 (iray) Pip.
Price Feed Quotes andian-dahatsoratra no nalefa tany amin'ny Trading Terminal anisan'izany Quotes rehetra omen'ny orinasa ny Mpanjifany teo amin'ny fangatahana sy ny vidin-javatra rehetra, raha ny marina nitarika ny asan'ny fanahy Trading.
Quote Sandam-bola (Counter Sandam-bola) dia vola izay ny vidin'ny fitaovana dia denominated. Tao amin'ny Sandam-bola Miaraka tsiroaroa Counter Sandam-bola dia aseho amin'ny alalan'ny denominator.
Quote dia vidiny amin'ny izay ny Trading Operation amin'ny fitaovana azo natao.
Quote Mode (famonoana Type) dia ara-teknika ny dingana fandraisana (manamafy) ny vidiny amin'izao fotoana izao sy ny fanaovana ny varotra ny Client. Ireo fomba Quote Available Tsy mitovy arakaraka ny karazan-Trading ny terminal sy ny fanaka ary ahitana ireo voalaza ao amin'ny mifanaraka Appendices ho amin'ity fifanarahana ity.
tonga saina (raikitra) Financial Result dia ara-bola Result amin'ny Round Trips. Result ratsy ara-bola eo amin'ny Round Trips dia Client ny very, tsara anankiray dia mahasoa.
Dia mandroso sy miverina dia mitambatra roa mifanohitra Trading asan'ny fanahy amin'ny boky iray ihany (manokatra ny toerana sy ny manaraka fanakatonana): mividy ny manaraka fivarotana na nivarotra ny fividianana manaraka momba ny toerana sy ny mitovy Ticket (ID).
Short Position dia mivarotra ny fitaovam nanantena fa ny vidiny (zava-dehibe) dia hidina.
Spot Instruments dia Sandam-bola X-metaly, izay mandray anjara amin'ny asan'ny fanahy Trading araka ny fitsipiky ny toerana tsena. Ny lisitry ny Spot fitaovana ampiasain'ny Company dia mazava eo amin'ny Company ny Website sy eo amin'ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
fielezan'ny no maha samy hafa ny Anontanio Price sy ny Ampandehano Price ny fitaovana, izay voalaza ao amin'ny Pips. Mety tsy hitovy ny fihanaky miankina amin'ny tsena fepetra.
Stop Loss dia tandindon nomena ny Client ny Order raha, raha toy izany Order dia napetraka mba hivarotra amin'ny vidiny (taha) izay ambany kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny tsena, na ny mividy amin'ny vidiny (taha) izay ambony kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny tsena. Ny tena tanjon'ny Stop Filaharana dia ny hitarika ny Trading Operation amin'ny tsena amin'izao fotoana izao araka ny Lamin vidiny ny vidiny dia tonga amin'ny alalan'ny fitaovana ny vidiny.
Stop-Out dia tsy maintsy fanakatonana ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ny toerana amin'ny vidin'ny tsena rehefa azo ekena Level ny fatiantoka dia tonga. Fitsipi-maintsy fanakatonana ny Client dia afaka miovaova ny toerana arakaraka ny nampiasa Trading Terminal ary voafaritra ao Appendices ho ny fitsipi-Trading asan'ny fanahy.
Atsaharo-Out Level dia habetsahan'ny fatiantoka ny Open Position (toerana) ny Client naneho toy ny isan-jato izay raha ny tonga mahatonga an'ilay fanirian maintsy fanakatonana ny toerana (toerana) ny orinasa tao ny tena vidiny tsy misy fampahafantarana mialoha ny Client. Atsaharo-Out Levels isaky Trading Terminal dia faritana amin'ny Company ny Website ka nametraka teo amin'ny Company ny Server. Raha toa ka misy zavatra hafahafa ny vaovao voatondro ao amin'ny orinasa dia hahery ny Server.
SWAP dia rollover iray Open Position ny Client ho any amin'ny ampitso. Ny lamina sy ny fepetram-SWAP no napetraky ny orinasa isaky ny karazana ny Trading Terminal.
mifidy dia kely dia kely fiovana ny vidin'ny fitaovana. Manokana soatoavin'ny kongona rehetra Fitaovana dia navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny ny Company sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Ticket (ID) tsy manam-paharoa famantarana maro fa ny Company dia mitondra ny lohateny hoe mba manendry ny toerana misy misokatra na eo am-piandrasana Order ny Client ao amin'ny Trading Terminal.
Trading Account Client dia manokana ny Account ao amin'ny firaketana an-tsoratra rafitra fitandremana ny orinasa ampiasain'ny mitandrina izany ho lalana rehetra Non-Trading asan'ny fanahy vokatra, varotra vokatra, Open Fihevitra, Baiko sy ny fihetsika sy ny fangatahana ny Client izay nandinika ny amin'ity fifanarahana ity sy ny Appendices.
Trading Day dia ny androm avy 21:00:00 ny 20:59:59 (GMT), afa-tsy ny faran'ny herinandro sy ny fety. Ny fanokafana sy ny famaranana ny fotoana azo Trading Day Nitady tetika hafa indray ho an'ny 1 ora nandritra ny ririnina sy ny lohataona ny fotoana tetezamita. Ny vaovao farany momba ny faran'ny herinandro sy ny fety dia aseho eo amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra.
Trading Hours dia ny androm nandritra izany asan'ny fanahy Trading famonoana na Order fametrahana ho fitaovana azo atao. Ara-barotra isaky ny elanelam-potoana io dia faritana fitaovana eo amin'ny Company ny Website sy hihazona ny varotra lohamilina. Ny fanazavana ara-barotra mpizara hanjaka raha misy tsy mifanohitra. Nandritra Non-Trading Hours Trading asan'ny fanahy famonoana sy ny fametrahana Order (fanovana) misy azo atao.
Trading Operation dia ny fiovam-po eo-ny-mifanohitra amin'ny ara-bola fitaovana asa tanterahana eo amin'ny Client sy ny Company amin'ny fomba tsy deliverable, i.e. fandidiana midika mividy na mivarotra zava-maneno, izay misy ny teny «hividy» na «mivarotra» dia heverina ho toy ny ara-teknika teny tsy misy famindrana ny tompon'ny fitaovana. Varotra asan'ny fanahy dia natao tao amin'ny Company ny toerana misy.
Trading Operation Volume dia habetsahan'ny ny fitaovana izay efa namidy na nividy amin'ny antsapaka, vondrona ny fandrefesana ny mifanitsy Instrument na ara-barotra eo amin'ny vola vola ny fahaiza-mandanjalanja (arakaraka ny nampiasa Trading alalan'ny terminal).
Trading Terminal dia rindrankajy sy ny fitaovana manokana, izay mahatonga ny Client mba mitovy hevitra amin'ny ny orinasa amin'ny alalan'ny solosaina tambajotra manerantany momba ny teny sy ny toe-javatra manan-danja ny asan'ny fanahy Trading novonoina ao anatin'ny sehatry ny amin'ity fifanarahana ity ary koa mba hanoratra ny fepetra nankatoavina, hametraka sy Nofoanana ny Filaharana. Ny Trading Terminal mamela ny hahazo vaovao ara-bola ara-bola avy amin'ny iraisam-pirenena tsena, mandefa toromarika any amin'ny Company sy ny fandraisana ho mpikambana sy mandray ny tatitra avy amin'ny Company. Ny Trading Terminalshall manome ny famantarana ny Mpifanaraka (fanamarinana ny Mpifanaraka) fa fifanakalozana hafatra ary koa ny tsiambaratelo sy ny tsy fivadihana ny hafatra noho ny fanampian'ny naorina-in fitaovana ny cryptographic fiarovana. Ny voalaza rindrambaiko sy ny vaovao dia ahitana fitaovana milentika sy ny sehatra ara-barotra Libertex ary koa rafitra hafa hirotsaka ho fampiasana ny orinasa mba ho famonoana ny Fifanarahana.
antony Asset dia pananana izay ao am-pototry ny fitaovana sy izay novidim na amidy rehefa mampianatra Trading asan'ny fanahy. Asset fototra azo aseho amin'ny alalan'ny vola (Base Sandam-bola), boloky hazo, entana, indices, hoavy ary koa ny zavatra hafa, anton-javatra sy ny toe-javatra araka ny lisitra neken'ny Company.
tsy tanteraka (mitsinkafona, Current) Financial Result(Mitsingevana Profit / Loss) dia ara-bola Result for Open toerana ambony ao amin'ny amin'izao fotoana izao ny vola vidin'ny Fitaovana. Ratsy ara-bola Result for Open Fihevitra dia mitsingevana Loss, tsara iray dia mitsingevana Profit.
fanesorana Type dia iray amin'ireo karazana vola Ny famoizana dia nanome ny Client ao amin'ny misy azy Manokana Account Management Portal.
Tafatafa niarahana tamin'ny Lohan'ny Product Department - LIBERTEX
Sehatra ara-barotra Libertex